MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward Auto Telephone numbers will be changed to updated exchanges - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Auto Telephone numbers will be changed to updated exchanges
[:en]In Yangon Hanthawaddy S-12 exchange of Kyimyindaing RSU area and Alone exchange area Auto Telephone numbers will be changed to updated exchanges
Yangon, Myanmar, 27 October, 2015 – Myanma Posts and Telecommunications (MPT), the first and leading telecommunications operator in Myanmar, announced that they will change the auto telephone numbers to updated exchanges in order to give better and upgraded services to customers.
IP system NGN (Next Generation Network) Mayangone (SoftSwitch) exchange will be replaced with MSAN (Multi Service Access Node).Kyimyindaing RSU area number (50xxxx, 51xxxx, 52xxxx, 53xxxx) of Hanthawaddy S-12 exchange will be changed to Mayangone (SoftSwitch) exchange numbers (931-7xxx) on November 20, 2015.
IP system NGN (Next Generation Network) Alone (SoftSwitch) exchange will be replaced with MSAN (Multi Service Access Node).NEAX-61 Container exchange numbers (214xxx, 215xxx, 216xxx, 217xxx) will be changed to Alone ZXSS10SS1B numbers (213-4xxx, 213-5xxx, 213-6xxx, 213-7xxx) on November 14, 2015.
The new number can be used not only for voice calls but also for ADSL. Static IP at Alone area will be changed to Static IP Range (172.x.x.x) Network. So current ADSL users have to contact to Myanmar Posts and Telecommunications, Information Technology Department, ADSL section, phone 01-650870, 01-662707.[:my]ရန်ကုန်မြို့ ဟံသာဝတီ S-12အိတ်ချိန်း၊ကြည့်မြင်တိုင်RSUနယ်မြေအတွင်းနှင့် အလုံအိတ်ချိန်းနယ်မြေအတွင်းအော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအားခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲမည်။
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ၂၇ ရက် – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သော မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) က ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေးနှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်ရန် ရန်ကုန်မြို့ ဟံသာဝတီ S-12အိတ်ချိန်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်RSUနယ်မြေအတွင်းနှင့် အလုံအိတ်ချိန်းနယ်မြေအတွင်း အော်တို တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအားခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့်ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်ကြောင်းယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာ လိုက်သည်။
မရမ်းကုန်း (Softswitch) အိတ်ချိန်း၏ IP စနစ်သုံး NGN (Next Generation Network) အမျိုးအစားကို MSAN (Multi Service Access Node)များနှင့် အစားထိုးပြောင်းလဲတပ်ဆင်မည်ဖြစ်၍ဟံသာဝတီ S12 အိတ်ချိန်း၏ ကြည့်မြင်တိုင် RSU မှ (၅၀x x x x,၅၁x x x x,၅၂x x x x,၅၃ x xx x) စသောနံပါတ်များအားမရမ်းကုန်း Soft-X3000 (Softswitch) အိတ်ချိန်း၏ (၉၃၁-၇x x x) စသောတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များဖြင့် (၂၀.၁၁.၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် အစားထိုးပြောင်းလဲမည် ဖြစ်သည်။
အလုံ (Softswitch) အိတ်ချိန်း၏ IP စနစ်သုံး NGN (Next Generation Network) အမျိုးအစားကို MSAN (Multi Service Access Node) များနှင့် အစားထိုးပြောင်းလဲတပ်ဆင်မည်ဖြစ်၍ NEXA-61 Container အိတ်ချိန်း၏ (၂၁၄x x x,၂၁၅x x x,၂၁၆x x x,၂၁၇ x x x) စသောနံပါတ်များအားအလုံ ZX-SS10SS1B Softswitchအိတ်ချိန်း၏ (၂၁၃-၄x x x,၂၁၃-၅x x x,၂၁၃-၆ x x x,၂၁၃-၇ x x x) စသောတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များဖြင့် (၁၄.၁၁.၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် အစားထိုးပြောင်းလဲမည်ဖြစ်သည်။
အသစ် ပြောင်းလဲအသုံးပြုမည့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များသည် တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသာမကအင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု ADSL စနစ်ပါ လျှောက်ထားသုံးစွဲ နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အိတ်ချိန်းနယ်မြေများအတွင်းတွင် လက်ရှိ ADSL သုံးစွဲသူများအနက် Static IP သုံးစွဲသူများအနေနှင့် Static IP Range (172.x.x.x)Network သို့ ပြောင်းလဲမည် ဖြစ်၍ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာန၊ ADSL ဌာနစိတ်၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် (၀၁-၆၅၀၈၇၀ ၊ ၀၁-၆၆၂၇၀၇)တို့ သို့ ဆက်သွယ်၍ ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။